IAmazon Music Unlimited iqala ukwanda kwaye ngoku iyafumaneka e-UK, Germany nase-Austria | IPhone iindaba
Kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo sikwazise ngenkonzo entsha yokusasaza umculo, inkonzo ephantsi kwegama leAmazon Music. Intengiso enkulu kwi-intanethi kwakukudala icwangcisile ukwazisa ngenkonzo yomculo yokuncedisa ukuhanjiswa kwevidiyo kwaye kwiiveki ezimbalwa ibikho eUnited States. ngamaxabiso anomdla, ngakumbi kubasebenzisi abaqhelekileyo beqonga leAmazon. Le nkonzo intsha yokusasaza umculo sele iqale uhambo lwayo lwamazwe aphesheya kwaye sele iqale ukufikelela eYurophu, kanye i-United Kingdom, iJamani ne-Austria, ngenxa yoko akufuneki ithathe ixesha elide ukubakho eSpain.
Amaxabiso ale nkonzo e-United States ayi- $ 9,99 kwiiakhawunti ezizodwa, $ 7,99 ngenyanga / $ 79 ngonyaka kubasebenzisi beAmazon Prime, $ 3,99 kubasebenzisi beAmazon Echo, kunye nezicwangciso zosapho ziyafumaneka. vumela ukusetyenziswa kwamalungu ama-6 osapho olunye.
Abasebenzisi beAmazon Prime banomrhumo wenyanga nge-euro ezimbini ezingabizi kakhulu kunokhuphiswano lwabo, njengeApple Music kunye neSpotify kwaye ukuba ikwangabasebenzisi beAmazon Echo, ixabiso lihlala kwi- $ 3,99, amaxabiso okhuphiswano kakhulu kwaye ngawo iAmazon iza kuzuza ngokukhawuleza inani elikhulu labasebenzisiLogama isicelo, icandelo elibalulekileyo lale nxaki, linomdla njengabachasi balo. Amaxabiso eAmazon eJamani, apho sele ikhona, ayafana naseMelika kodwa ngeeuros.
Ikhathalogu yoMculo weAmazon, njengaleyo yokhuphiswano, Yenziwe ziingoma ezingaphezu kwezigidi ezingama-40, kubandakanya izihloko eziphezulu ezivela kwaSony, iUniversa Music, iWarner, kunye namakhulu eelebheli zerekhodi ezizimeleyo. Ngokungafaniyo neApple Music, ixesha lokulingwa ziintsuku ezingama-30 kuphela, endaweni yama-90 asinikwa ngumculo osasazwa ngu-Apple.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Ukhuphiswano » IAmazon Music Unlimited iqala ukwanda kwaye ngoku iyafumaneka e-UK, Germany nase-Austria
UApple usungula intengiso yeKrisimesi kwaye kubonakala ngathi yiHalloween kwakhona